China Zvinhu zvisere zvemakemikari ekudzivirira magurovhosi uye zvinyorwa zvakadzama vagadziri uye vanotengesa | Joysun
Zvinhu zvisere zvemakemikari ekudzivirira magurovhosi uye manotsi zvakadzama
Makemikari ekudzivirira magurovhosi
Icho chikamu chakakosha mukugadzirwa kwemakemikari uye inogona kuchengetedza hutano hwevashandi. Vanhu vazhinji vanoziva makemikari ekudzivirira magurovhosi, asi ivo havazive zvakakwana nezvazvo. Heano marudzi masere emakemikari ekudzivirira magurovhosi zvinhu, uye tsananguro pfupi yehukama hwavo hwakaenzana.
Yokutanga: latex yakasikwa
Kazhinji kutaura, yakasarudzika latex ine chengetedzo iri nani kune aqueous mhinduro, senge acid uye alkaline aqueous mhinduro. Zvakanakira ayo kunyaradzwa, kusimba kwakanaka uye kushandisa shanduka.
Rudzi rwechipiri: Nitrile
Iyo ine yakanaka yekudzivirira zvinhu zvinopesana nemafuta, girizi, petrochemical zvigadzirwa, zvigadzirwa uye akasiyana solvents. Nekudaro, kuzvimba kunogona kuitika mune mamwe manyungudiki, kuchikanganisa hunhu hwayo uye kudzikisira kuchengetedzwa.
Rudzi rwechitatu: polyvinyl chloride (PVC)
Iyo ine simba rekuchengetedza pane yakawanda nhamba yemvura-inogadziriswa makemikari zvinhu, senge maacidi uye alkalis, asi haigone kuchengetedza zvinhu zvakasikwa senge solvents, nekuti akawanda solvents anonyungudutsa mapurasitiki ari mairi, ayo asingazokonzere chete kusvibiswa, asi inoderedzawo zvakanyanya chipingamupinyi mashandiro egurovhosi.
Inenge yakasununguka seyakasikwa rabha. Iyo ine chengetedzo yakanaka yezvigadzirwa zve petrochemical uye mafuta, inogona kuramba ozone uye ultraviolet mwaranzi, uye zvakare ine yakasimba anti-kukwegura zvivakwa.
Chechishanu: polyvinyl doro:
Iyo ine yakanaka yekudzivirira mhedzisiro pane akawanda makemikari solvents, asi iri nyore kunyungudika mumvura, uye kushanda kwayo kuchadzikiswa mushure mekusangana nemvura, uye izvo zvinhu zvakaoma uye zvisingaite kugadzirisa.
Chechitanhatu: butyl chakaita zvokugadzirwa rabha
Iyo ine yakanaka yekudzivirira mhedzisiro pamakemikari makomputa uye yakasimba acids. Izvo zvakaoma kugadzira uye kugadzirisa. Inenge isina chinodzivirira pamafuta nemafuta, asi ine yakanyanya kunaka yekudzivirira hunhu pane magasi.
Chechinomwe: Fluorine rubber
Fluorinated polymer, iyo substrate yakafanana neTeflon (polytetrafluoroethylene), uye simba rayo rekumusoro simba rakaderera, saka madonhwe haagare pamusoro, izvo zvinogona kudzivirira kupinda kwemakemikari. Inonyanya kubatsira kune chlorine-ine solvents uye anonhuwirira mahydrocarbon. Maitiro ekudzivirira akanaka.
Chechisere: Chlorosulfonated polyethylene:
Iine zvidziviriro zvezvinhu zvakawanda zvemakemikari, inogona kuchengetedza alkalis, maoiri, mafuta uye akawanda solvents, uye ine yakanaka yekudzivirira kumatunhu epamusoro uye akaderera, kupfeka kuramba, kukombama kuramba uye zvichingodaro.
Iwo anonyanya kushandiswa anowanzo kuve echisikigo latex, butyronitrile, uye polyvinyl chloride (PVC) yekuruka magurovhosi cores.
Post nguva: Jul-06-2020